Paunenge uine nyoro kana RFQ yebhegi yekurara, asi mutengi wako asina chero zvataurwa, anogona chete kukupa zvaunoda kuti tembiricha yacho ichashandiswa kana tembiricha ipi. Ungaita sei kugadzira bhegi kuti rukwane nechinangwa?
Ndechipi chichava chikamu chakakosha chekupisa mwero?
Inosanganisira mummy chimiro, envelopu chimiro uye envelop ine hood. Chimiro chemummy chakanakira kusvika pamhepo yakadzika yekudziya, iyo envelop chimiro ndeyekakamuri uye yakagadzikana, asi yakaoma kusvika yakaderera zvakanyanya kudzika mwero. Envelop ine hood yakarongeka uye yakagadzika seyenvelopu, uye zviri nani kupfuura envelop kuti isvike tembiricha yekushisa, asi isina kunaka saamai mummy kusvika pakadzika tembiricha level.
Isu pano zvinoreva nezvekuvaka kwekuchera uye zvimwe zvivakwa.
· Simply 1 musana. Uku kuvakwa kunowanzo shandiswa muhomwe yezhizha kana 3 mwaka wekurara bhegi.
Kuvakirwa kwezvikamu zviviri, ndiyo inoshandiswa nzira kugadzira homwe yekurara yakakodzera kushandiswa kunotonhora kwemamiriro ekunze. Zvinoenderana nebasa redu, zvinoshanda nemazvo. Vakawanda vemauto akarara bhegi ne
Kuvakwa kwezvikamu zviviri.
· Matatu kana anopfuura materu, kuitira kuti tisvike pakanyanya kupisa tembiricha, tinogona kugadzira kazhinji mabiko mana ekurara bhegi kusvika zvino.
· Inodziya collar inowanzogadziriswa kumusoro kwechikamu chekurara bhegi kuvhara mweya unopisa mukati mekabhegi.
Iyo inonyanya kushandiswa kweye mummy yekurara bhegi uye envelop yekurara bhegi ine hood.
· Mhepo inokatyamadza kazhinji inogadzirisa zipper yekudzivirira kutonhora kupinda muchikwama kuburikidza ne zipper zino.
· Dhirowa tambo kuvhara yakashama nepadiki sezvinobvira.
· Kwete kudzoswa pane ganda rekudzivirira mhepo kuti ipfuure nepakati pemakona emano.
· Yakavandudzwa "mbiri H kamuri" kudzivirira mhepo kuti ipinde nepakati pemakona emano. Ndokumbira utore maFAQ. https://www.greencampabc.com/faqs/
Izvo zvigadzirwa zvichashandiswa kwekurara bhegi kune chikuru kuedza pane kwakanyanya kupisa. Inosanganisira kuvhara & ganda uye kutonhodza.
Kazhinji, kune maviri mhando dzezvinhu zvinoshandiswa sekuisa muhomwe dzekurara. Imwe ndeyekugadzira fiber, imwe iri pasi. Pasi aigona kusvika yakaderera zera pane yekuisira fiber yakavakirwa pane yakafanana vhoriyamu. Yakasiyana yekugadzira fiber zvakare ine maitiro akasiyana.
Shell & mucheka wakarukwa
Bhegi reZhizha rinowanzoshandisa jira rinorema uye jira rinotonhora remamiriro ekunze rinowanzove rakapfava uye rakagadzika jira, zvinoitawo zvakanaka kudzivirira.
Kune chero chiyero chenyika dzese kutsanangura chiyero chekushisa chemabhegi ekurara?
Kune maviri marudzi epasi rose, EN ISO13537 & EN ISO23537. EN ISO13537 yakagadzirwa kutanga, EN ISO 23537 ndiyo yakavandudzwa shanduro. EN ISO13537 & EN ISO23537 yakafanana chaizvo zvakajairwa uye zvese zviri zviviri izvi zvinoshanda. EN ISO23537 ine zvimwe zvakadzama marongero zvine chekuita nharaunda bvunzo chete. Iyo yazvino vhezheni yezve 2 zviyero ISO13537-2012 & ISO23537-2016. Nezviri izvi zviyero, tinogona kutsanangura dzinopisa zvakanyanya. Nei zvisiri chaizvo hazvina kunyatsoitika, nekuti munhu akasiyana anonzwa zvakasiyana. Uye kuitira kutsanangura chiyero chenyika, kune zvimwe zvinhu zvisina musoro, senzira yekuyedza, envelop uye mummy zvakasiyana.
Nguva yekutumira: Jun-10-2020